ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သဘောတူစာချုပ်အတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာဆေွးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း - Ministry of Education
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သဘောတူစာချုပ်အတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာဆေွးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
December 6, 2019 - 9:59 pm | News
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ ပညာရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သဘောတူစာချုပ်အတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နေလယ် ၁နာရီတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၂၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အမျိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၆-၂၀၂၁)ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုနိုင်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်ရန် အခြေခံပညာရေး၊ နည်းပညာ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အတွက် အမျိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ အဓိကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုနှစ်အထိ ၅နှစ်အတွက် ရန်ပုံငွေများ ပံ့ပိုးခဲ့ခြင်း အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်း မည်သည့်ခွဲခြာမှုမျှမရှိဘဲ ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိရေး၊ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှမကျန်ရှိ စေရေး၊ ကျောင်းနေမြဲ၍ ကျောင်းထွက်သူမရှိစေရေး စသည့်မူဝါဒများြဖင့် ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အခြေခံပညာရေးတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ၂၁ရာစု ပညာရေးနှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကြောင်းနှင့် သင်ရိုးသစ်ကို သင်ကြားခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို စည်းကမ်းလိုက်နားမှု ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်တိုးတက်လာခြင်း တီထွင်ကြံဆမှုနှင့် စဥ်းစားတွေးခေါ်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာပါ ကြောင်း၊ Grade-3 ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်း အခြေခံ အရေး၊ အဖက်၊ အတွက် ကောင်းမွန်စွာတတ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ မူလတန်းပညာအားလုံး ပြီးမြောက်၍ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာရေးသို့ ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကျောင်းနေမှုအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိနိုင် ရေးအတွက် ဒေသအလိုက်လိုအပ်သော စာသင်ကျောင်းများ တိုးမြှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဆရာဆရာမများ ခန့်ထား ပေးခြင်းနှင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံး တွင် လုပ်သားစျေးကွက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော အရည်သွေးရှိ နည်းပညာ သက်မွေးပညာရေးနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာ ဆိုင်ရာ သင်တန်းအစီအစဉ်များ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရန် ကျောင်းများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံဌာနများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးပါသော ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထို့ေနာက် ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Kristian Schmidt က အမှာစကားပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် တာဝန်ရှိသူများက Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသူများက ဆွေးနေွးကြပါသည်။
ယနေ့ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးကို ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Kristian Schmidt၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်များ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ EU Deligation to Myanmar မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက် ကြပါသည်။
အလားတူ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် EU Deligation to Myanmar သံအမတ်ကြီး H.E Mr.Kristian Schmidt နှင့်အဖွဲ့သည် ပျဉ်းမနားမြို့ အမှတ်(၂)အ‌ြေခခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ ဆရာဆရာမများ၊ မိဘများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံပြီး စာကြည့်တိုက်၊ စာသင်ခန်းများအား လှည့်လည် ကြည့်ရှု အားပေးကြပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Total Hits : 1141873449